Rita, Writing for My Sake!: July 2009
ဝင်ကစွပ် - Hermit Crab
(မြင်ဖူးမှ ယုံစဖွယ် - ဦးကြင်ဥ)
မမခင်ဦးမေ ၏ Hello Singapore နှင့် ရွာသား ၏ ဘာကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား... များ ဖတ်ပြီး သတိရသဖြင့် ကောက်တင်လိုက်ပါသည်။
Posted by Rita at 7/28/2009 08:21:00 PM 24 comments Links to this post
Labels: Feeling, Poem, Singapore, This and That, ကဗျာ
How I composed "She, falls into Love" ...
"အချစ်ရှိတဲ့သူ" ကို 2000 အစပိုင်းလောက်မှာ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
လူတကိုယ်လုံး ပေါ့ပါး မြောက်ကြွပြီး လွင့်ပါးနေခဲ့တဲ့ တချိန်ပေါ့။
လေညင်းလေး တချက် ဝှေ့လိုက်ရုံနဲ့တင်
မြင့်တက် မြောက်ကြွ သွားတော့မယ်...
အဲဒီ တပိုဒ်က အရင်ဆုံး ချရေးဖြစ်တာပါ။ အဲဒီ စာသားလေးတွေ ချမရေးခင် ကိုယ်အကြိမ်ကြိမ် ပြန်မြင် သတိရနေတဲ့ မြင်ကွင်းလေး တစ်ခုရှိတယ်။
Forrest Gump ကား အစမှာ Tom Hanks ရဲ့ ခြေထောက်နား ချာလည် ဝေ့၀ဲပြီး ကျလာတဲ့ ငှက်မွေးလေးရဲ့ပုံကိုပေါ့။ အဲဒီကားကို အစအဆုံး မကြည့်ဖူးပါဘူး။ 1994 လောက်မှာထင်တယ်။ ဖေဖေကြည့်တုန်း ခဏ ၀င်ကြည့်လိုက်မိတာပါပဲ။ ကဗျာမရေးခင် အဲဒီ scene လေး ပြန်မြင်လာရာက ပထမတစ်ပိုဒ် ဖြစ်လာတယ်။
ကိုယ်ဟာ လေတိုက်ရုံနဲ့ လွင့်ပါးတော့မယ့် ငှက်တောင်မွေးကလေးပါ။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ ပထမပိုဒ်ပြီး တပတ်လောက်ကြာသွားတဲ့ထိ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ပေးလိုက်ပြီ။
လေပြည်လေး တချက် ထိခတ်လိုက်ရုံနဲ့တင်
ကြွေကျ သက်ဆင်း သွားနိုင်တယ်...
ဒီတပိုဒ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိလှပါဘူး။
ပထမပိုဒ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ရေးဖြစ်လိုက်တာပါပဲ။
လေအေးအေး တချက် ဖြတ်တိုက်လိုက်ရုံနဲ့တင်
တလွင့်လွင့် လှုပ်ရှား သွားတော့မယ်...
ဒီတပိုဒ်ကို ရေးတော့ အာရုံထဲဝင်လာတာက ဂျူး ရဲ့ "ရေမျောသီး" ထဲက စာတကြောင်းပါ။
"ကျွန်မ၏ ဇာခန်းဆီးကလေးသည် အင်ဒရူးဝိုင်ယက်၏ ဇာခန်းဆီးလောက် မနူးညံ့သော်လည်း..." ဆိုတာလေး ခေါင်းထဲ ဖျတ်ခနဲ ရောက်လာတော့ တတိယ တစ်ပိုဒ် ဖြစ်လာတယ်။
သစ်ရွက်ဖျားမှာ ခိုတွဲနေတဲ့ နှင်းပေါက်ကလေးလို
နေရောင်ခြည်က ညင်သာသာ ရှိုက်နမ်းရုံနဲ့တင်
ရှက်အမ်းစွာ လွင့်ပါးပျောက်ကွယ်... ...
သူမရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေ ရပ်စဲရလိမ့်မယ်...
အဲဒီ တပိုဒ်ကတော့ dedicated လုပ်ပြီး ရေးထားတာပါ။
အလိုက်ဖက်ဆုံး နိမိတ်ပုံလေး ယူပြီးတော့...
ကဗျာ နောက်ဆုံးပိုဒ်မှာ ကဗျာထဲက အရာတစ်ခုကို အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်ပစ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေတောင်မှ ပျောက်ဆုံး ကုန်တဲ့ထိ...
ရင်ထုမနာ ဆိုတာ ဒါမျိုး နေမှာ...
Posted by Rita at 7/26/2009 11:34:00 PM 10 comments Links to this post
Labels: Poem, remembrance, ကဗျာ
အထီးကျန် ကမ္ဘာထဲ လာထည့်ပြပါလိမ့်မယ်
(မင်းခိုက်စိုးစန်တို့ တာရာမင်းဝေတို့ မော်ဒန်တွေ ဖတ်ပြီး ရူးနှမ်းခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ရေးထားခဲ့တာပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အနုပညာ ဇာတာ မပါမှန်းလည်း မသိခဲ့သေးတဲ့ အချိန်လေ။ သူတို့သာသိရင် တစ်သက်လုံး နောင်တရသွားနိုင်တယ်)
(သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး မရှိကြတော့ဘူး လို့ အချိန်တော်တော် ကြာကြာကတည်းက ခံစားရတယ်။)
Credit for Photo : Nyan Htun
(Midway between Italy and Spain)
Posted by Rita at 7/18/2009 12:05:00 AM7comments Links to this post
(1998 လောက်က ရေးထားမိတယ် ထင်ပါတယ်... ဘယ်အချိန်ကို ညွှန်းပြီး ရေးထားမှန်း ကိုယ်တိုင် မမှတ်မိတော့တဲ့ ကဗျာ)
Posted by Rita at 7/15/2009 11:01:00 PM 13 comments Links to this post
အားနွဲ့သူ ယောက်ျားသားများအား ကာကွယ်သော ဥပဒေ
ခေတ်သမိုင်း အတီတေ ရှေးမင်းအဆက်ဆက်က အတောင် ၃၀ ၀တ် မင်းယောက်ျားများသည် Subject နေရာက အစဉ်အမြဲ ရှိခဲ့သော်လည်း ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ ၃ တောင်ဝတ် မိန်းမသားများ၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် စီရင်အပ်သော မာယာကျော့ကွင်းကို တုမယှဉ်နိုင်တော့ဘဲ အရှုံးပေးရဖန်များကာ Object နေရာသို့ ရောက်ရှိလာကြကုန်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခင်က မိန်းမများအား ကာကွယ်သော ဥပဒေ အရပ်ရပ်ကိုသာ ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ရာမှ ယနေ့ခေတ် ယောက်ျားများ အတွက် ယောက်ျားသားများအား ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပေးပါရန်
- blogger ပုရိသများက Post များ တင်၍ တမျိုး၊
- စာရေးဆရာပုရိသများက ကဗျာ ၀တ္ထု ဆောင်းပါးများ ရေး၍ တသွယ်၊
- သာမန်ပြည်သူ ပုရိသများက လူစည်ကားရာ နေရာများ၊ speaker corner များတွင် ဆန္ဒပြပွဲများ၊ ကဗျာ ရွတ်ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်၍ တဖုံ၊
နားပူနားဆာ ပြုမှုများ တခဲနက် လုပ်ဆောင်လာကြပြီ ဖြစ်သဖြင့် များပြားလှစွာသော ယောက်ျားထုကြီး၏ အကျိုးကို ထောက်ထားစာနာခြင်း အလို့ငှာ...
ယနေ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ ၁၁ ရက်၊ စနေနေ့။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ ခု၊ ၀ါဆို လပြည့်ကျော် ၅ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ဥပဒေကြမ်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
ယင်း ဥပဒေအရ ... ကိုယ့်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်သွားသော ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ကို ကာအိနြေ္ဒပျက်စေရန် စနောက်ခြင်း၊ ထိကပါး ရိကပါး ပြောခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(ဥပမာ။ ။ မစန္ဒာ၏ ဂျီဟောသူ နှင့် အရိပ် ၀တ္ထုထဲကကဲ့သို့ "ဘဲဥခြမ်း ဖြူတူတူ ဆားရေနဲ့ကူ စက်မှုမောင် အမူတုံး ဘဲဥနဲ့ဖုံး" ဟူသော ပေါက်တတ်ကရ သံချပ်များ အော်၍ ဘယ်၊ ညာ တိုင်ပေးခြင်းဖြင့် အားနွဲ့သူယောက်ျားသားများအား ခြေလှမ်းမှားအောင် မပြုလုပ်ရ။)
မည်သည့် ရာသီဥတုတွင် ဖြစ်ပါစေ။ ညနေ ၅ နာရီကျော်၍ အလင်းရောင် ပျောက်သလောက်ရှိပါက အားနည်းချက်ရှိသူ ချစ်သူ ယောက်ျားလေးများအား ချိန်းဆို တွေ့ဆုံခြင်း မပြုရ။ ပြုခဲ့သော် ချိန်းဆို ခံရသော ယောက်ျားလေးဘက်မှ ချိန်းဆို စာသော်လည်းကောင်း၊ အခြား ခိုင်မာသော သက်သေ တစုံတရာသော်လည်းကောင်း တင်ပြနိုင်လျှင် ထိုမိန်းကလေးအား အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
(မည်ကဲ့သို့သော အားနည်းချက် ဖြစ်သည်ကို အရေးဆိုသူ Mr. Villager နှင့် ဥပဒေပြုရေး ကော်မတီဝင် လူကြီးမင်းမများ ညှိနှိုင်းပြီး အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်ကို နောင်တွင် ဖော်ပြမည်။)
ယောက်ျားအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူ blogger များ၏ post တွင် မိန်းမ အင်အားသုံး၍ comment များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရန်ပြုမည့် သဘောသက်ရောက်သော စာများ ရေးသားခြင်း၊ ရိသဲ့သဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်းများ အပျော်သဘောဖြင့် ဖြစ်စေ မပြုလုပ်ရ။ စိတ်သဘောထား ကြီးမြင့်သော ဂုဏ်သရေရှိ မိန်းမ ပီသစွာ သည်းခံခွင့်လွှတ်ရမည်။
(ဤသို့ ပြုလုပ်သဖြင့် blog ပိုင်ရှင် အမျိုးသားလေးခမျာ စိတ်ဆိုးပြီး comment page ကို ပိတ်ပစ်သည်ရှိသော်... comment ပေးသော အမျိုးသမီးထုကြီး အနေဖြင့် တနေ့တည်း post ဆယ်ခုစီ ဆက်တိုက်တင်၍ အနှီ blogger ပုရိသအား မကျေနပ်မချင်း တောင်းပန်ရမည်။)
မည်သို့သော အကြောင်းပြချက်မျိုးနှင့်မျှ အားနွဲ့သူ ယောက်ျားသားများ အပေါ်
- မာယာတစ်သိန်း အပလိန်း အနန္တနှင့် မြူဆွယ်ဖျားယောင်းခြင်း၊
- မိမိ၏ မာယာကျော့ကွင်းမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ရှာလေသူ အားနည်းချက်ရှိသည့် ချစ်သူ အမျိုးသားအပေါ် မိမိအသက်ကိုပင် အသေခံ၍ မကောင်းကြံစည်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
ပြုခဲ့သော် ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ကို နှစ်ရှည်လများ ကျခံရမည် ဟု တသက်နဲ့ တကိုယ် တခါမှ မကြားဖူးသည့် ဥပဒေကြမ်း ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မဟာဣတ္ထိယနွယ်ဝင် အမျိုးသမီးထုကြီး သိစေရန် လေးနက်ပြင်းထန်စွာ အသိပေး ကြေညာလိုက်သည်။
ဒု - ဥက္ကဌ (ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့အစည်း)
အတွင်းရေးမှူး (အားနွဲ့သူ ယောက်ျားသားများအား ကာကွယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေး ကော်မတီအဖွဲ့ခွဲ - လူသားချင်း စာနာထောက်ထားခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြုမှု ကော်မတီ)
အလုပ်အမှုဆောင် (ဖခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကြီး) <<< ပန်းရောင်ဝမ်းဆက်များ ၀တ်သည်။
စာကြွင်း။ ။ Mr သပသ ၀တ္ထုရေး၍ တောင်းဆိုသော အချင်းချင်း ဖြစ်သည့်ကိစ္စအား ကျမ်းလေးမည် ဖြစ်သဖြင့် အချင်းချင်းသာ ညှိနှိုင်းကြရန် ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်သည်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ အလယ်ခေတ်မှ စာရေးဆရာမ ဂျူး ရေးသားသည့် "ကြေမွသွားသော တိမ်တိုက်များ အကြောင်း" ၀တ္ထု ဇာတ်လမ်းမှ မြတ်စု အား ချစ်သူ ဖြစ်သူ ဖြူလေး မှ ပြန်လည် လက်မခံခဲ့သည့် ကိစ္စကို ယခု နှောင်းခေတ် ယောက်ျားသားများ အမြင်ရှင်းစေရန် အလို့ငှာ ဖြည့်စွက် ပြောကြားလိုသည်။
အနှီ မြတ်စု ဆိုသော အလယ်ခေတ်မှ ရှားပါး အားနွဲ့သူ ယောက်ျားသားသည် သူ မကျူးလွန်ခဲ့သည့် မြနှင်းဆီ အား သေကြောင်းကြံစည်သည့် ကိစ္စ အတွက် အမှုမှ အမှန်အတိုင်း ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍များ ဖြူလေးက ပြန်လည် လက်ခံလိုက်လျှင်၊ သူ မပြုခဲ့သော အပြစ်အတွက်လည်း မခံရ၊ သူ ပြုခဲ့သော အပြစ်အတွက်လည်း မခံရဘဲ မြနှင်းဆီ နှင့် ရှုပ်ခဲ့ရခြင်းသည်သာလျှင် သူ့အတွက် အမြတ်ထွက်နေပေဦးမည်။
ထိုထိုသော အကြောင်းများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အလယ်ခေတ်မှ ဓလေ့ထုံးစံများ အရသော်လည်းကောင်း မြတ်စုသည် ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး၊ လက်ထဲက ငှက်တစ်ကောင်ရော ခြုံထဲက ငှက်တစ်ကောင်ကိုရော လက်လွှတ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အလယ်ခေတ် မိန်းမများ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ အနိုင်ကျင့် ခံရခြင်း မဟုတ် ဟု ယနေ့ခေတ် အားနွဲ့ရှာသူ ယောက်ျားသားများ သံသယ ရှင်းစေရန် အလို့ငှာ ရေးသားဖြေရှင်း လိုက်ရပေသည်။
Posted by Rita at 7/11/2009 05:37:00 PM 15 comments Links to this post
Labels: Making Joke, This and That, ကမောက်ကမ
* Design from NLS's Blog
Posted by Rita at 7/11/2009 04:00:00 AM5comments Links to this post
၁) အချိန်ပြည့်ထက်တောင် ကျော်လွန်ပြီး သူ့အကြောင်းတွေချည်း တွေးမိနေလိမ့်မည်။
(အချိန်ပြည့်ထက် တကယ်ကို ကျော်နိုင်ကောင်းပါတယ်..ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ တချိန်တည်း နှစ်ထပ်ကွမ်း သုံးထပ်ကွမ်း အတွေးတွေ ထပ်ပြီး တွေးနေမိတတ်လို့ပါ)
၂) ပြောသမျှစကားမှာ သူ့အကြောင်း မပါ, ပါအောင် နားထောင်သူ အမြင်ကပ်ရလောက်အောင် အတင်း ဇာတ်သွင်း ပြောနေမိလိမ့်မည်။
(ခင်မင်ရင်းနှီးသော သူများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆဲသမျှ မကြာခဏခံရမည်)
(ဖုန်းတော့ တော်ရုံခေါ်မိမည် မဟုတ်)
(internet ကန့်သတ်မဲ့ ဇုံတွင်နေရသူ ဖြစ်ပါက... online တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လိုက်ရှာမည်။ Skype မှာလား..vzo မှာလား..gtalk မှာလား..(သို့) social network တွေ သုံးသူဖြစ်က .ning မှာလား...friendster မှာလား...facebook မှာလား...suboo မှာလား... Twitter မှာလား.. ဘယ် အချိန်က ဘာလုပ်ပြီး ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေ Q သွားလဲ)(internet က နယ်မြေတွေ သိပ်မကျွမ်းလို့ သိပ်ထည့်မရေးနိုင်ဘူး)
၅) သူ သုံးနေကျတွေ သူကြိုက်တတ်တာတွေ သူ ရှာနေတာတွေ သူ လုပ်နေသမျှတွေ အကုန် အကုန်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လိုက်မှတ်မိနေရုံမက လိုက်ပါလုပ်မိနေမည်။
(ဥပမာ- သူ့ laptop မှာ တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ anti-virus freeware က စ ကိုယ့် စက်မှာ ချက်ချင်းကောက်ပြီး install လုပ်မိမည်။ သူ့ အကြိုက် အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေ စက်ကတောင် မနိုင်အောင် DL လုပ်ပြီး ဘေးလူ ငြူစူအောင် ဖွင့်ဖြစ်နေမည်။ စာရိုက်လျှင်..(သို့) တစ်ယောက်ယောက်နှင့် စကားပြောလျှင် သူသုံးနေကျ အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်တွေ အလိုလို ပြန်သုံးမိလာမည်။)
၆) တိုက်ရိုက် တွေ့ဖြစ်ကြရင်တော့ သူလုပ်သမျှ ကန့်လန့်တိုက် ပြောချင်ပြောမိမည်။
(ဟင် ဒီ ရေမွှေးကြီးကတော့ အနံ့လဲ သိပ်မကောင်းဘဲနဲ့...ဟင် ဒီ software ကတော့ tech geek တွေ recommend လဲ မလုပ်ဘဲနဲ့... ဟိုလိုလုပ်တာကတော့ အချိန်ကုန်ရုံပဲ...ဒီလိုလုပ်တာကတော့ အလကားပဲ..အာရုံပဲ)
၈) အလုပ်လုပ်ရင်းတောင် မြင်ယောင်နေလို့ ခါတိုင်း နာရီဝက်နဲ့ ပြီးတဲ့ အလုပ် ၃ နာရီ မက ကြာလိမ့်မည်။
၉) သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ငယ်ဘ၀က အကြောင်း (သို့) တော်ရုံလူ သိပ်မသိနိုင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မိသားစု အလေ့အထ တစ်ခုခု အကြောင်းကို ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်ယောက်ထံမှ သိရပါက ထီပေါက်သလောက် ၀မ်းမြောက်ကြည်နူး ရှိနေမည်။ အတွေးထဲ စားမြုံ့ပြန်မဆုံး ဖြစ်နေမည်။
၁၀) သူ စိတ်ဆိုးပါက ရပ်တည်ရာ မြေကြီး မရှိတော့သလို... သူ့ ဒေါသကို မြင်ရပါက တကမ္ဘာလုံး သွက်သွက်ခါ သလို... သူ ဥပေက္ခာပြုတာ ခံရပါက တလောကလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစားတတ်လာမည်။
Posted by Rita at 7/09/2009 10:16:00 AM 17 comments Links to this post
သူ့ကျောပြင် အစွန်းနားမှာ ပါးအပ်လို့ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေချင်မိ...
ကန်ရေပြင်နဲ့ ၀င်တော့မယ့် နေမင်းကို အတူငေးရင်း သူ ရန်စလာတော့မှာကို ဟန်ဆောင် ရန်ဖြစ်ပစ်လိုက်ဖို့ စကားလုံးတွေ ကြိုရွေးနေချင်မိ...
သူ့ အပြုအမူ တချို့ကို နားမလည်နိုင်ရင်းကပဲ နားလည်ဟန်ဆောင် ချစ်စနိုး ပြုံးရယ်ချင်မိ...
သူ့ အကျင့်စရိုက် တချို့ကို စိတ်ပူ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ရင်းကပဲ (ကိုယ်မတတ်နိုင်ပါဘဲ) ပြုပြင် သိမ်းသွင်းချင်မိ...
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောတတ်တဲ့ သူ့ စကားသံကို မျက်လွှာချ နားထောင်ရင်း ပြန်လည် ၀မ်းနည်းချင်မိ...
ကိုယ့်ကို ကန့်လန့်တိုက် ပြောတိုင်းမှာ သူရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ကို ခွင့်လွှတ် လိုက်လျောချင်မိ...
ရုံးက ပြန်လာလာချင်း အဆောတလျင် online ပေါ်တက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာ သူပြောတတ်တဲ့ "ရေ အရင် သွားသောက်လိုက်ပါဦး" ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ထိခိုက် ကြည်နူးစွာ နားထောင်ချင်မိ...
အချိန်တိုင်းလို ဆူပူအော်ဟစ်ချင်တဲ့ သူ့ရှေ့မှာ ယောင်ယမ်း ခြေလှမ်းမှားချင်မိ...
အမြဲ သူပြုံးနေကျ လှောင်ပြုံးတစ်ခုရှေ့မှာပဲ ရှက်အမ်းစွာ ပြုံးရယ်ရင်း အရှုံးပေးချင်မိ...
အို...အခုတော့... ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင်လေ
"သူ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ပြောပြစမ်းပါ မေမေရယ်" လို့ ပုံပြင်ရှည် တစ်ပုဒ်လို မဆုံးတမ်း နားထောင် လွမ်းမောချင်မိ...
(ဟိုးအဝေးမှာ... မင်း ရှိသလား ချစ်သူရယ်... တလက်လက်လင်းတဲ့ ကြယ်ကလေးဆီမှာလေ...)
Posted by Rita at 7/08/2009 02:13:00 PM7comments Links to this post
မင်း ကိုယ့်ကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက
ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး ချစ်သူ…
ကိုယ့်ခြေလှမ်းတွေရဲ့ အသိမ်း အနုတ်ကို
မင်း နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်း
(ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မနိုးထချင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက် တစ်ခု အကြောင်း)
Posted by Rita at 7/07/2009 11:39:00 AM4comments Links to this post
ဆွေမျိုးများ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ နှင့် စိုသောလက်
ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တချို့ပါ။
မျက်စေ့ရှေ့မှာ မြင်တွေ့သိနေရတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ရေးမိတာ ဖြစ်ပေမယ့် တဦးတယောက်၊ တမိသားစု၊ တမျိုးတဆွေကို ရည်ညွှန်းချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျ လူတွေထဲမှာ ဖြစ်တတ် တွေးတတ်တာတွေပါပဲ။ ကိုယ်သာ သူတို့နေရာမှာဆိုလည်း ဒီလိုပဲ တွေးမိကောင်း တွေးမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်လူ အနေနဲ့ ကြည့်တော့ ပိုပြီး ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရတာတွေ ရှိလာပါတယ်။
တချို့ ဆွေမျိုးစုတွေဟာ သွေးချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နေရာဒေသပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိပ်လည်း မဝေးကြပါဘဲ အပတ်အသတ် အဆက်အဆံမရှိ ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဒါတွေ သိပ်တော့လည်း မဆန်းပါဘူး။ မြို့ပြကြီးလေ ပိုများလေ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒါမျိုး ကိုယ်တွေထဲမှာလည်း ရှိတာပါပဲ။ ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက် ကြည့်ရင် အကုန် ချစ်ကြည် စည်းလုံးလေသတည်း ဆိုတာချည်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ ရေစက်ရှိသရွေ့ပါပဲ။
ခုရေးမိရင်းမှာ စိတ်ထဲ ဝေဖန်ချင်တာ၊ ကဲ့ရဲ့ချင်တာ၊ ပြုပြင်ချင်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တချို့တွေမှာ ရှိတတ် ခံယူတတ်တဲ့ သဘောထားကိုတော့ ဆန်းစစ်လေ့လာကြည့်ချင်မိတယ်။
တယောက်က တယောက်ထက် ပိုပြီး မြင့်မားသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဆွေမျိုးတွေကြား ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ ကိစ္စတွေ (၃) ပိုင်းမြင်မိတယ်။
"သစ်တပင်ထက်ကောင်းလို့ ငှက်တစ်သောင်းနားတယ်" ဆိုတာ ပထမတစ်မျိုးလို့ ထားပါတော့။
နောက်တမျိုးက မြင့်သွားတဲ့လူက မူမမှန်လို့ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ ပြတ်တောက်ကုန်တာ။
အဲဒီနှစ်မျိုးလုံး ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး။
တတိယတမျိုးက ကိုယ် ဆန်းစစ်ချင်တဲ့ တမျိုးပေါ့။ ဟိုဘက် ဒီဘက် ဘာမှ ပြဿနာမရှိဘဲ မမြင့်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့လူက "မာန" ကြောင့် ဆိုပြီး သက်သက်မဲ့ အဆက်အဆံ မလုပ်တော့တာမျိုး။ ဒါမျိုးကျ ဆန်းတယ် ထင်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါမျိုးအဖြစ်တွေက ရှိလည်း ရှိတယ်၊ ရှားလည်း မရှားဘူး။ ဆွေမျိုးချင်း ပတ်သတ်ဆက်စပ်မှုမှာ မာနလို့ ပြောရင် ကိုယ့်ဘက်က သူ့ကို မမှီချင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောလို့ ကိုယ်တော့ သဘောပေါက်မိတယ်။
ပြဿနာ တစုံတရာ မရှိဘဲ ဒါမျိုးတွေးပြီး ပြတ်တောက်တယ် ဆိုတာ တော်တော် နှမျောစရာ ကိစ္စလို့ပဲ ထင်မိတယ်။ မမြင့်တဲ့ သူကသာ မြင့်တဲ့သူကို မှီလို့ရမယ် လို့ တွေးတာဟာ တကယ်တော့ လမ်းချော်နေသလိုပဲ။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သူမှ တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရှိသလို၊ ကိုယ်မှ တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စလည်း ရှိတာပဲ။ တခြား မကြည့်ပါနဲ့။ ဖိနပ်ပြတ်၊ ထီးပျက်ရင်တောင် ဈေးထဲက ဖိနပ်ပြင်၊ ထီးပြင်တဲ့သူကို မှီခိုရသေးတယ် မဟုတ်လား။
ဒီနေရာမှာ ပိုက်ဆံပေးခိုင်းတာပဲ လို့ တွေးမယ်ဆို တွေးလို့ရပါသေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်လေ။
သို့သော် သူတို့ မရှိ ကိုယ်ဘာသာ လုပ်တတ်တာ မှတ်လို့။ လုပ်တတ်ရင်ရော လုပ်ချင်လို့လား။ လုပ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အချိန် လုံလောက်လို့လား။ ကိုယ် ပြောချင်တဲ့ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုတာ အဲဒါပါ။
ဗမာအများစုရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ မလွတ်လပ်ဘူး။ အထဲထဲမှာပဲ တ၀ဲဝဲလည်ပြီး နေတယ်။
မျက်စေ့တဆုံးကိုလည်း မကြည့်ဘူးလိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ကပဲ သူ့ကို မှီရတော့မယ်။ အဲလိုတော့ မမှီဘူးရယ်လို့ မာနဆိုပြီး ထွက်လာကြတော့တာပဲ။ တကယ်တမ်း တဖက်ဖက်က အကူအညီလိုပြီ ဆိုတော့မှ ပြန်ပတ်သတ်ဖို့ကျတော့ တယောက်ကို တယောက် ရှိန်နေပြန်ရော။
ရလဒ်က ပြတ်တောက်ကုန်တာ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိ။ တကယ်တော့ ဘာအကျိုးမှ မျှော်ကိုးစရာ မလိုပါဘူး။ ဘယ်သူမှ အထီးတည်း နေမဖြစ်တဲ့ လောကမှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘဲတော့ သွေးသားရင်းချာတွေ ပြတ်တောက်စရာ မလိုပါလေ။
ကိုယ့် အမျိုးထဲမှာ ကိုယ် တော်တော် အားကျမိတဲ့ အဒေါ်ဝမ်းကွဲ တယောက်ရှိတယ်။ (သဘောမကျတဲ့ အမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။) သူက စီးပွားရှာလဲကောင်း၊ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်မျှ၊ အမျိုးတွေပေါ်ဆိုလည်း အာရုံမပြတ်ရှိတယ်။ စိတ်ရှိရင်တောင် သူလိုမျိုး လုပ်ဖို့က ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလုပ်နိုင်တယ်။
သူနဲ့ကိုယ့်ကြားမှာ ကိုယ်ခုထိ မမေ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ဝင်ကာစမှာပေါ့။ အင်ဂျင်နီယာတွေ အတွက် အမေရိကားက အလုပ် အခွင့်အရေး တစ်ခု သူသတင်းရတော့ နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို တကူးတက ဖုန်းဆက်ခဲ့တာပါ။ ခါတိုင်းလဲ ဖုန်းဆက်နေကျပါပဲ။ အဲဒီ တခေါက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် သက်သက်မဲ့ သူဆက်ခဲ့တာပေါ့။
နယ်ကလူ လှမ်းပြောမှ ကိုယ်လဲ သိတော့တယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြီးကျယ်တဲ့ အကူအညီလဲ မဟုတ်ဘူး။ Mechanical တွေပဲ ခေါ်တာမို့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်လဲ ဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့အကြောင်းတွေးတိုင်း ဒါကို ကိုယ် အမြဲ သတိရတယ်။
ကိုယ်ပြောတဲ့ထဲမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်စပ် ပတ်သတ်မှုပဲ ပါပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ အကူအညီ အမှီအခို ဘာမှ မပါပါဘူး။ ပြောချင်တာက ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိစ္စပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မေတ္တာမပါရင်တော့ လုပ်လို့ မရဘူး။ အပေါ်ယံဆိုရင် သိပ်သိသာတယ်။
ဒီမှာ ဆွေမျိုးတွေ ရှိရက်နဲ့ ပြတ်တောက်နေကြတာ၊ ပတ်သတ် ဆက်ဆံ မရှိကြတာ တွေ့ရင် သူတို့တွေ ရေစက်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်နေကြသလိုပဲ တွေးမိတယ်။ အပြစ်လဲ မတင်ချင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သဘောထားတွေကိုတော့ စောကြောချင်မိတယ်။ ဘယ်အမျိုးမှ အားမကိုးရတာ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်ကို အားကိုးစရာ မလိုဘူး ဆိုရင်ပေါ့။
အမျိုးတွေ ပြတ်တောက်နေလို့ အမျိုး မဟုတ်တဲ့ လူတွေကို အားကိုးနေရတယ် ဆိုရင်တော့လည်း ဘာထူးမှာလဲ။
ပြီးတော့ ဟိုနေ့ကတင် တွေးမိတာတစ်ခု။
ကိုယ် အိမ်ကို ငွေလွှဲတဲ့ခါ ဖေဖေတို့ အဒေါ်တို့ အသိ agent ကနေ အမြဲလွှဲပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ဈေးဟာ သူများဈေးထက် အမြဲနည်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အဲဒီကပဲ အမြဲပို့ဖြစ်တယ်။
သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပိုများတဲ့ဆီက မလွှဲတာလဲ တဲ့။ ကိုယ်က ဖေဖေတို့ မိတ်ဆွေ မို့လို့ပါ လို့ ပဲ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ပိုများတဲ့ဆီ ပြောင်းတာ လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဒါပေမဲ့ စိုသောလက် မခြောက်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက်အရ လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုမှ နည်းပေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲလို ဆိုရင်လဲ တမျိုးပေါ့။
ငွေ လေးငါးထောင်ဟာ သူ့ချည်းသက်သက်တော့ တန်ဖိုးရှိချင် ရှိမယ်။
မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ ပတ်သတ်မှုနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိဘူး။
ဖေဖေတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေအဖြစ်ကို ကိုယ်ဆက်ထိန်းချင်လို့ အဲဒီမှာပဲ ကိုယ်ပို့တယ်။
အဲဒီ agent က ကိုယ် ဒီလာတော့ လေယာဉ်လက်မှတ် ကိစ္စ အစအဆုံး ကူညီခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရတော့လည်း အပြန် Ticket refund ထုတ်ဖို့ ကိစ္စ ကူညီ ပြန်ပါတယ်။
ကိုယ်က အဲဒါကြောင့် အဲဒီကပဲ မပြတ်ငွေလွှဲတယ်လို့ ထင်ရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ လုပ်မပေးလဲ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နိုင်တာပဲ။
သူတို့ ကူညီခဲ့တာကလည်း သူတို့ဆိုင်ကနေ ကိုယ် ငွေမပြတ်လွှဲလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့မှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ်မလွှဲလဲ သူများတွေ လွှဲနေမှာပဲ။
ကူညီတယ် ဆိုတာ...ဖေဖေက သူတို့မိတ်ဆွေမို့ ကိုယ့်ကိစ္စကို သူတို့ ၀င်လုပ်ပေးခဲ့ကြတာပဲ။
ကိုယ်ကလဲ သူတို့က ကူညီခဲ့တယ်လေ ဆိုတဲ့ နှောင်ကြိုးနဲ့ မဟုတ်ပါ။
လေယာဉ်လက်မှတ် ကိစ္စဆိုတာ ဘယ်မှာ လုပ်လုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ပတ်သတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ပါပဲ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ ပိုရတဲ့ ဆိုင်ကနေ ပြောင်းလွှဲလဲ သူတို့ ဘာဖြစ်မလဲ။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဆိုတဲ့ ပတ်သတ်မှုမှာတော့ ပြတ်တောက်မှု တစ်ခု ဖြစ်သွားမှာပဲ။
တဦးနဲ့ တဦး အပြန်အလှန် မှီခို ဆက်စပ် ကျေးဇူးပြု နေကြတာကို အညမည သဘောလို့ ဆိုနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ (မှားရင် ပြင်ပေးပါ။)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တော်တော်များများ ဘုရားစင်ရှေ့ ခြေထောက်ကျိန်းအောင်သာ ထိုင်ချင်တာ။ ဘုရားဟောတွေ တွေးကြည့်ဖို့တော့ အဲဒီ တော်တော်များများဟာ စိတ်မ၀င်စားကြဘူး။
ဘုရားသဘောကျ နေဖို့ဆို ဝေးရော။ (ကိုယ်လဲ ပါပါတယ်။)
မှတ်ချက်။ ။ စိုသောလက် မခြောက်စေနဲ့ ဆိုတာကို အများအားဖြင့် အလှူအတန်းပြုတဲ့ ကိစ္စနဲ့
ပတ်သတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြပေမယ့် - လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို
ခိုင်ကျည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးလဲ ကြားဖူးတဲ့ အတွက် ဒီနေရာမှာ သုံးထားပါတယ်။
ဟိုတပတ်ကပဲ ထီးကိုင်း ကောက်သွားလို့ ထီးပြင်တဲ့ လူတွေ အကြောင်း စဉ်းစားမိပြီး ရေးချင်နေတဲ့ ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Rita at 7/06/2009 01:56:00 PM6comments Links to this post
Labels: Singapore, This and That, Thought
ဟိုးအဝေးက အသံတွဲတစ်စကို သယ်လာရင်း
ငှက်ကလေးတို့ တေးဆိုသံကို ကြားတဲ့အခါ
ဇွန်ပန်းရုံ သစ်ရွက်ကလေးရဲ့ နောက်က
ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးရဲ့ မွှေးရနံ့ထဲမှာ
(မင်းကြားအောင် မခေါ်နိုင်ခဲ့တာက လွဲရင်...နေရာအနှံ့မှာ အဲဒီခေါ်သံတွေ ကိုယ် ၀ှက်ထားခဲ့ပါတယ်)
Posted by Rita at 7/05/2009 12:21:00 PM7comments Links to this post
ကိုယ် စင်ကာပူကို မရောက်ခင် နှစ်လလောက် အလိုမှာ ကိုယ့်အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခု ကြိုပြီး ရောက်နှင့်တယ်။ အဲဒါ မိုင်သီ ပါ။
ဖေဖေ့ဆရာက ကိုယ်နေဖို့ ကြိုငှားပေးထားတဲ့ အိမ်မှာပဲ မိုင်သီ နဲ့ စတွေ့တယ်။
ချင်းသွေး ပါတဲ့ စစ်ကိုင်းက အညာသူပေါ့။ သူက ACCA တက်နေတယ်။
ကိုယ်က လူကဲခတ်ကောင်းတယ် ပြောရမလား။
စတွေ့ပြီး စကားပြောကြည့်တာနဲ့ sense လုပ်လို့ရတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်နဲ့ ဓါတ်တည့် မတည့် ဆိုတာကို...
မိုင်သီနဲ့ တွေ့တွေ့ချင်းပဲ အနှစ်နှစ် အလလ သိလာခဲ့ပြီး သူတွေလို ကိုယ်တို့ ရင်းနှီး တွဲဖက်မိသွားတယ်။
သူက သိပ်ရိုးသားတယ်။ အေးဆေးနေတတ်တယ်။
(အဲဒါ မကောင်းဘူး။ ရိုးသားပြီဆိုရင် တော်တော်လေးကို စွာပေးနိုင်မှ တော်ကာကျတာ။
သူ့ကြောင့် ကိုယ့်မှာ fighter လဲ ဖြစ်ဖူးတယ်။)
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် ဘယ်လောက် စွာလို့၊ သူ ဘယ်လောက် အေးဆေးလည်းပဲ သူက ကိုယ့်ထက် စောစောစီးစီး ကြိုတင်ရောက်နေခဲ့တာ ဆိုတော့ ဆွေမျိုးသားချင်း မရှိတဲ့ အရပ်ကို တယောက်ထီးတည်း ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အတွက် မိုင်သီက အားကိုးအားထားရာလည်းဖြစ်၊ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲ ပြုရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
MRT ကို ဘယ်လို စီးရတယ် ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊
MRT ကဒ်ပြားကို ဘယ်လို Top Up လုပ်ရတယ်ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊
S'porean တွေရဲ့ English ကို ဘယ်လို နားထောင်လို့မှ မရသေးတဲ့ ကိုယ့်ကို NTUC မှာ ဈေးဝယ်ပြီးလို့ cashier မှာ ရှင်းပြီဆိုရင် သူတို့မေးတဲ့ member လား ဆိုတာကို no လို့ ဖြေရတယ် လို့ သင်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊
ကိုယ့် ပထမဦးဆုံး အင်တာဗျူးကို (ကိုယ် မခေါ်ရဘဲ သူကိုယ်တိုင် စ ကမ်းလှမ်းပြီး) အဖော်လိုက်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊
ATM ကနေ ငွေဘယ်လို လွှဲရတယ်၊ ငွေဘယ်လို ထည့်ရတယ်၊ ငွေဘယ်လို ထုတ်ရတယ် ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊ ငွေဘယ်လို ထည့်ရလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ် မေ့သွားပြီ။ (iBanking ကျတော့ ကိုယ်က ပြန်သင်ပေးရတယ်)
အလုပ်တော်တော်နဲ့ မရတော့ ကိုယ်နဲ့တူတူ ငိုပေးခဲ့တဲ့သူ၊
ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကျတိုင်း "ရမှာ၊ အလုပ်က ရကို ရမှာ" လို့ အားပေးခဲ့တဲ့သူ၊
(အဲဒီ စကားလေးဟာ ခုနေ ပြန်စဉ်းစားတော့ ဘာမှ မဟုတ်သလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အချိန်ကတော့ တကယ့် အားဆေးပဲ။)
သူ စိတ်နေကျ ၁၀၈လုံး စိတ်ပုတီးကို အတင်းလာပေးပြီး ကိုယ့်ကို ပုတီးမစိတ် စိတ်ဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးတဲ့သူ၊ (ကိုယ်သယ်လာတဲ့ ပုတီးက ၉ လုံး ပုတီး)၊
ဖေဖေဆုံးလို့ ကိုယ်ပြန်တော့... လေယာဉ်ကွင်းကို ရောက်မှ ကိုယ် သူ့ဆီ msg ပို့ဖြစ်တယ်။
သူ အလုပ်လုပ်နေရာကနေ rest room ထဲသွားပြီး ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်ရင်း ငိုနေခဲ့တယ်။
လောလောဆယ် ပြန်စဉ်းစားလို့ မရတာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ သူရှိနေလို့သာ စင်ကာပူမှာ ကိုယ့်ပထမဆုံး နေ့ရက်တွေကို အလွယ်တကူ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာ။
သူသာ ရှိမနေဘူးဆိုရင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ စင်ကာပူ experience ဟာ အများကြီး အခက်အခဲ ရှိမှာ သေချာတယ်။
သူက ကျောင်းကနေလား၊ part time အလုပ် ကနေလားမသိဘူး ပြန်အလာ "သူပြန်လာပြီ စိတ်ညစ်တယ် အိမ်ကိုလွမ်းတယ်" လို့ msg လှမ်းပို့တယ်။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်လာကြိုမယ် လို့ ပြန်ပို့ပြီး တစ်ရှူးတော်တော်များများ ယူပြီး ဆင်းသွားတယ်။
တွေ့ပြီး စကားတောင် ကောင်းကောင်း မပြောနိုင်ဘူး လမ်းမှာ သူက မျက်ရည်တွေ ကျလာတာပဲ။ ဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ သူ့လက်ထဲကို တစ်ရှူးစတွေ ထည့်ပေးရတယ်။ (ကြိုတင် သိမြင် စီမံနိုင်သော အရည်အချင်းပေါ့လေ)
နေတဲ့ block နဲ့ နှစ် block ၊ သုံး block လောက်ခြားတဲ့ ပန်းခြံလေးထဲမှာ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ တူတူထိုင်ပြီး ငိုကြတယ်။
သူသာ ရှိမနေဘူးဆိုရင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံး စင်ကာပူ နေ့ရက်တွေဟာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး အများကြီး ခက်ခဲခဲ့မှာ သေချာတယ်။
ကိုယ် stay ပြည့်ခါနီးထိ အလုပ်မရဘဲ သူလည်း မကြာခင် အိမ်ပြောင်းဖို့ ဖြစ်လာတယ်။
တရက် ကိုယ် အလုပ်လျှောက်နေရာကနေ သူ့ကို msg လှမ်းပို့ကြည့်တော့ သူ Bishan မှာလို့ ပြန်တယ်။ သူပြောင်းမယ့် အိမ်ကို သွားကြည့်တာ။ ကိုယ်က "မင်း အိမ်သွားကြည့်တာလား" မေးတော့ "ဟုတ်တယ်" တဲ့။ "ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့တော့မှာပေါ့" လို့ ဆိုတော့...သူ ဘာပြန်ခဲ့လဲ သိလား...
ကိုယ့်မှာ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကြားက မပြုံးဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်ပြီး၊ "I love you" လို့ ပြန်လိုက်တယ်။
အဲဒါ ကိုယ် stay မပြည့်ခင် သုံးပတ်လောက် အလိုပေါ့... လကုန်ရင် သူ အိမ်ပြောင်းမယ်... လကုန်ရင် (အလုပ်မရရင်) ကိုယ် အိမ်ပြန်ရမယ်...
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ Bishan အိမ်ကို တူတူပြောင်းမယ် ဆိုတာက တပြားမှ မလျှော့ဘူး။
သင်္ကြန်တရက်မှာ TP ကနေ Bishan ကို နောက်တခေါက် အိမ်တူတူ သွားကြည့်ကြသေးတယ်။ stay ပြည့်ဖို့ နှစ်ပတ်အလိုမှာ... အလုပ်က ဘယ်မှာနေမှန်း မသိသေး... အဲဒီ အိမ်ခံ အစ်မကတောင် "သိပ်ချစ်ကြတာပဲနော်" လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။
ကြားထဲမှာ အင်တာဗျူး ၃ ခုလောက် လာသေးတယ်။ အဲလိုလာတိုင်း သူက ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကတော့ နှစ်ပတ်အလိုလောက်မှာ တော်တော် ငြိမ်သက်နေပြီ။
သူနဲ့တူတူ စီးတီးဟောလ်ကို သွားပြီး Air Ticket ကို book လုပ်လိုက်ပြီ။
တော်ပြီ မိုင်သီ ကိုယ် အိမ်ပဲ ပြန်တော့မယ်...
ငိုလဲ မငိုချင်တော့ ... ရီလဲ မရီချင်တော့ ...
ကိုယ့်မှာ ကျွန်ဇာတာ မပါဘူး ထင်ပါရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ပြန်ရမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့...
"ဘယ်သူပြောလို့ ရမှာလဲ မင်း ပြန်ရမယ်လို့။"
"ဟင့်အင်း ကိုယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ပြန်မှာပါ"
"ကပ်ပြီးမှ မရဘူး ပြောနိုင်လား"
"တော်ပါတော့ ကိုယ် ပြန်လာမှာပါ"
"ဟုတ်တယ်လေ။ နှစ်ရက်တောင် ကြားထဲမှာ ရှိနေတာ"
"Spass တင်တာ နှစ်ပတ်လောက် ကြာဦးမှာလေ ဆရာရဲ့"
"မင်းကွာ ပြောလို့ မရပါဘူး"
စနေ ၊ တနင်္ဂနွေမှာ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အမေက တရားရိပ်သာမှာ ၂ ရက်ဆက်လား မသိဘူး အလှူလုပ်တော့ သူ သွားကူရတယ်။ အဲဒီ သူငယ်ချင်း အမေက သူ့သမီးနဲ့ မိုင်သီနဲ့ကို ကူပေးလို့ မုန့်ဖိုးပေးမှာဆိုတော့ ဒါလဲ အလုပ်ပဲပေါ့။ ညတောင် သူဟိုမှာပဲ အိပ်ရတယ်။
တနင်္ဂနွေ ညကျတော့ သူ အိမ်မှာ ပြန်အိပ်တယ်။
ကိုယ်က အိမ်ပြန်နောက်ကျတယ်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ လျှောက်သွားနေလို့။
ဘယ်ကိုလဲ သိလား... Khatib က ရေကန်ကို...
ဘုရား ရှိခိုးပြီး အိပ်တော့ ကိုယ့် စိတ်တွေ ကြည်ကြည်လင်လင်ပဲ။ ဒီကနေ မပြန်ရလောက်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ တချက်ဖြစ်လိုက်တာ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိ။ (မပြန်ချင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်)
စင်ကာပူ စရောက်ကတည်းက Upside Down ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့် ဘ၀ကို နောက်တကြိမ် Upside Down ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ တရက်ပေါ့။ (အဲဒီတော့မှ အတည့် ပြန်ဖြစ်သွားတာ)
ဖုန်း call တခု ၀င်လာတယ်။ မတိုင်ခင် ၁ ပတ်၊ ၁၀ ရက်လောက်ဆီက ကိုယ့်ကို ဗျူးခဲ့တဲ့ အလုပ်ကပါ။
2nd Interview အတွက်လို့ ခေါ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် PP နဲ့ Cert. တွေ အားလုံး ယူလာပါတဲ့။
မိုင်သီသိတော့ သိပ်ကို အားရသွားပုံနဲ့ "သွား၊ သွား မြန်မြန်သွား" ဆိုပြီးပြောတယ်။
ရုံးကို ၁၀ နာရီလောက်ရောက်၊
ဘာမှ မဗျူးဘဲ Online ကနေ Spass တန်းတင်
တထိုင်တည်းမှာပဲ Approved ဖြစ်၊
Raffle Hospital မှာ Medical Check Up သွားလုပ်...
ဘ၀ဆိုတာ အဲဒီလိုလားဟင် !!!
ကိုယ် ပျော်လည်း မပျော်ရွှင်ပါ။
အတက်အကျ အပြောင်းအလဲတွေ ဆိုတာ ဘေးက ရပ်ကြည့်မှသာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတာ...
ကြုံနေရတဲ့သူအဖို့ရာမှာ ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မိုင်သီ့ကိုတော့ အရင်ဆုံး အကြောင်းကြားရပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ ကျေးဇူးရှင်တွေက ခပ်များများဆိုတော့ Raffle မှာ Check Up လုပ်တဲ့ထိ msg တွေ ပို့လို့ မပြီးသေး... ဆရာဝန် ခေါ်တာ ပထမ မကြားလို့ (မကြားဆို ကိုယ့်နာမည်ကို ဘယ်လို အသံထွက်ပြီး ခေါ်နေမှန်းမှ မသိတာ) နောက်မှ အပြေးအလွှားသွား
လက်ထဲက ဖုန်းက တတီတီနဲ့
Pressure လဲချိန်ရော "မင်းမှာ hyper tension ရှိတယ်" ဆိုတော့ "
ဟမ် ငါ့မှာ ဘယ်လိုလုပ် အဲဒါရှိမှာလဲ သွေးပေါင်တောင် ပြည့်ရဲ့လား မသိဘူး" လို့ ဆရာဝန်ကို ပြန်ငြင်းမိသေး... (ချက်ချင်းပဲ ဇာတိကပြ)
"မင်း ငါခေါ်တော့ ပြေးလာတာကိုး အဲဒါကြောင့်နေမှာပေါ့" တဲ့...
အို Hyper Tension လောက်ကတော့ ဆေးမှတ်ချက်မှာ minor ဆိုတာ ကိုယ်သိပါတယ်။
(ဘာဖြစ်လို့ သိတာလဲ မမေးပါနဲ့)
အဲဒီနေ့က မိုင်သီ အလုပ်မှာပဲ ညအိပ်ပြန်ပါတယ်။
နောက်တနေ့ အင်္ဂါမနက်ကျတော့ ကိုယ်က MOM မှာ extension လုပ်ဖို့အသွား
မိုင်သီက အလုပ်ကနေ အပြန် AMK Mrt မရောက်ခင် လမ်းခုလတ်မှာ နှစ်ယောက်ဆုံဖြစ်ကြတော့ တွေ့တွေ့ချင်း တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး အကျယ်ကြီး အော်မိကြတယ်။
တကယ်ပဲ ကိုယ်တို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားသလို နောက်တရက်မှာ Bishan အိမ်ကို တူတူပြောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်။
နေရစ်တော့ Ang Mo Kio...
အလုပ်ဝင်ပြီးတော့လည်း မိုင်သီ ကိုယ့်ကို Bank Acct. တူတူလိုက်ဖွင့်ပေးတယ်။
ပထမဆုံး လမှာ Bank Acct. မှာ Alphabet တလုံးပိုသွားတော့ ရမယ့်လခက တော်တော်နဲ့ မ၀င်လာ... ရုံးက cheque ရေးပေးတယ် ... ကြားမှာ ပိတ်ရက်ခံနေတာ ဆိုတော့ တော်တော်နဲ့ ပိုက်ဆံက မရောက်...
ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံ မရှိတာ သိတော့ တောင်းစရာတောင် မလိုဘဲ ချက်ချင်း ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတယ်။
ကိုယ်က မိုင်သီ့ဆီက ပိုက်ဆံချေးဖို့ ၀န်လေးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ချိန်ပြောပြော ရမှန်းသိလို့ အေးဆေးနေတာပါ။ အားလဲ မနာပါဘူး။ နှစ်ရက်နေရင် ကိုယ့်ဆီ ပိုက်ဆံ ၀င်လာမှာပဲ။
ထမင်းစားပြီး ကိုယ် အခန်းထဲ ၀င်လာတော့ သူ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံ ၃၀ ထုတ်ပေးတာကို... ဒါတောင် သူလဲ ကျောင်းသားဆိုတော့ သူ့မှာလဲ များများ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး...
(ကိုယ့်ကို မတောင်းဘဲ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ နောက်မှ သူ့အကြောင်းရေးမယ်)
Bishan အိမ် ပြန်အပ်ခါနီးတော့...သူပြောတယ်။ "ကိုယ် အလုပ်ရရင် တူတူ ပြန်နေကြမယ်နော်" တဲ့။
အဲဒီအချိန် ကိုယ်က အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ "အင်း" လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ် ထင်တယ်။
အဲဒီနောက်တော့ သူက သူ့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတဲ့ Ang Mo Kio ကို ပြန်ပြောင်းရပြီး ကိုယ်ကတော့ အလုပ်နဲ့နီးရာ AJ ကို ရွေ့လာခဲ့တယ်။
လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သူ မြန်မာပြည်ကို အပြီး ပြန်တော့မယ်။
ဒီနေ့ပဲ ကိုယ်သူ့အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် booking လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ သူ ဒီနေ့ အလုပ်လုပ်နေလို့။
ပြန်လာဖြစ်မယ် ဆိုရင်တောင် ကြာဦးမှာ...
ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဘယ်သူ သိမလဲ။
တကယ်တော့ AMK အိမ်မှာ ကြုံခဲ့တဲ့ အခန်းဖော်တွေ အားလုံး စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့တူတူ တခန်းတည်း နေခဲ့တဲ့ programmer သူငယ်ချင်းနဲ့ nurse အစ်မ (အဲဒီ အစ်မက နောက်ပိုင်း Bishan ထိ အခန်းဖော် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်)။
ဒါပေမယ့် တခြား အခန်းဖော်တွေက သူတို့ အလုပ်နဲ့သူတို့ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကျောင်းပဲတက်တဲ့ မိုင်သီနဲ့ အလုပ်ရှာဆဲ ကိုယ်က တတွဲတွဲ အဖော်ဖြစ်နေခဲ့တာ...
(Bishan အိမ်မှာ ကြုံခဲ့တဲ့ အခန်းဖော် ညီမလေးတွေကတော့ ပြောစရာ အထူးမရှိ။ ခုထိ အပြင်မှာ သူတို့နဲ့ တွေ့ရင် အလိုလို မြူးလာရော...ကလေးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ်နဲ့...)
မနေ့က Peninsula မှာ ညစာ တူတူ စားဖြစ်တယ်။
ကိုယ်တို့ စတွေ့တဲ့ အချိန်ကို သတိရမိတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ခဏတာ အချိန်လေးဆုံခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ့်ကံကောင်းမှုတွေ အတွက် အတူတူ ပျော်ရွှင်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ့် ကံဆိုးမှုတွေ အတွက် အတူတူ ငိုကြွေးပေးခဲ့တဲ့သူ...
ဒါကြောင့်လည်း ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ သူတွေက လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ရှာကြတာနေမှာ...
မနေ့ညနေက ရိုက်တဲ့ပုံ... (ပဲချည်းပဲ)
(ကိုယ့်ပုံကိုတော့ သည်းခံကြပါ။ ရိုက်မယ် မထင်သေးလို့ အိုက်တင် မခံလိုက်ရဘူး။)
သူမပြန်ခင် ဒီ post ကို အပြီးတင်ချင်လို့ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း ဖိတ်ထားတဲ့ dinner ကိုတောင် ဖျက်လိုက်တယ်။
သူပြန်မယ့် အချိန် ရုံးကနေ မှန်းပြီး မျက်ရည်လည်နေတော့မယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ငိုမိမလား မသိဘူး။
ခုတောင် ကိုယ် စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်း မမြင်ချင်တော့ဘူး။
အရာရာတိုင်းအတွက် မိုင်သီ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ မပျက်မကွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ ဆုံရလောက်တဲ့ ကုသိုလ်ကံအကြောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လို့။
Posted by Rita at 7/04/2009 09:25:00 PM 19 comments Links to this post
Labels: Friend, remembrance, Singapore, မိုင်သီ